“Waxaan Ugu Baaqayaa Xukumada Somaliland. Ganacsatada Iyo Baanka Dhexe Inay U Tudhaan Shacabka”. Suldaan Xasan Suldaan C/Laahi | Hangool News
“Waxaan Ugu Baaqayaa Xukumada Somaliland. Ganacsatada Iyo Baanka Dhexe Inay U Tudhaan Shacabka”. Suldaan Xasan Suldaan C/Laahi
Hargeisa(HNG)Suldaan Xasan Suldaan C/laahi Suldan C/raxmaan oo ka mid ah salaadiinta Somaliland ayaa xukumada iyo ganacsatada ugu baaqay in ay u tudhaan shacabkooda oo ay maceeshada(quutal daruuriga) ay hoos u eegaan,
Suldaan xasan suldaan c/laahi ayaa qoraal kooban oo usoo gaadhsiiyey shabakada warar Hangool ayaa waxuu u dhignaa sida tan.
“waa ayaan daro in maalinba maalinta ka danbaysa meceeshadu sii qaaliyowdo oo ganacsatadii wadanka u dhashay ay ka fikiraan oo kaliya in ay shay kasta ka macashaan boqol jibaar intii laga soo siiyey”
Waxaynu ognahay bariiska iyo baastadu qiimaha ay ka taagan yihiin aduunka halkana waxa lagu siiyaa intaa halkaa lagu siiyo tobankeed arintaasina waxa kasii daran sarifka lacagta qalaad. Waxaad arkaysaa magaalada hargeisa gudaheeda oo kaliya boqolkii dolar lagu sarifaayo lix boqon iyo konton ilaa todoba boqol inta u dhaxaysa “
Ganacsatadu iyagaa markay dan leeyihiina doolarka jabiya marka ay urur-sadaana qaaliyeeya, shacabka dalkani ku dhaqani run tii waa dad wanaagsan oo u dul qaata mar xalad kasta oo soo wajahda noloshooda. waxay iskugu jiraan danyar bukaan. Iyo mid aanay noloshiisu dhaafsiisnayn maalin dagaal”
Suldaanka oo sii wada hadaliisa ayaa yidhi “waxaan ugu baaqayaa xukumada Somaliland. Ganacsatada iyo baanka dhexe oo ay mas,uuliyadiisu tahay ilaalinta qiimaha lacagta in ay meel uga soo wada jeestaan sidii shacabka sixir bararka iyo abaaruhu saameeyeen ay ugu tudhi lahaayeen oo waajib qaran oo cad mas,uuliyadeedana ay leedahay xukumada talada haysa in ay ogaato waxay ku nool yihii shacabka ay mas,uulka ka tahay,
Gabagabadii suldaanka guud waxa uu bulshada Somaliland ilaahay uga baryey in uu kaso gaadho abaaraha afeeyey badiba gayiga Somaliland,
“waxaan eebbe ka rajaynayaa in uu dadkiisa kaso furto abaaraha inta buktana uu caafiyo”.